Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Etihad Airways iphehlelela iinqwelo moya eziya eVienna, eOstriya
Airlines • isikhululo • Iindaba zaseOstriya eziziiNdaba • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE • Iindaba ezahlukeneyo
Inkonzo entsha yenzelwe ixesha elifanelekileyo lokufika kwangentseni eVienna ukubonelela abahambi phakathi kwe-UAE neAustria ngendlela efanelekileyo yokubaleka ngempelaveki.
I-Etihad Airways ibhengeza iinqwelomoya ezintsha zaseVienna kweli hlobo.
Le nkonzo iza kusebenza kabini ngeveki kusetyenziswa iBoeing 787 Dreamliner ukusukela nge-18 Julayi 2021.
I-Austria okwangoku ivuleleke kubemi nakubemi baseOstriya nakubemi bamazwe angamalungu eSchengen, abahambi kwezoshishino kunye nabafundi.
Etihad AirwaysInqwelomoya yenqwelomoya ye-UAE, izakwazisa ngenqwelomoya eVienna kweli hlobo. Le nkonzo iza kusebenza kabini ngeveki kusetyenziswa iBoeing 787 Dreamliner ukusukela nge-18 Julayi 2021.
Abahambi abatyelele eVienna baya kuyonwabela inkcubeko yakudala kunye nembonakalo entle. Idolophu enkulu yase-Austrian ivotelwe ngokungatshintshiyo sesona sixeko siphilayo.
Ukwenza lula amava ohambo kunye nokubonelela ngoxolo lwengqondo, Etihad Airways Kutshanje kusungulwe i-Verified to Fly, evumela iindwendwe ukuba ziqinisekise amaxwebhu abo okuhamba eCovid-19 ngaphambi kokufika kwisikhululo seenqwelomoya.
Abahambi abasebenzisa i-Verified to Fly banokuyonwabela indlela yokungena kwisikhululo seenqwelomoya ngokuya kwidesika yeFly Verified ukuze ufumane amava akhawulezileyo kunye nogudileyo.
Ukuhamba ngenqwelomoya ukuya, ukusuka, nangokudlula e-Abu Dhabi kuxhaswa yinkqubo yococeko yokucoceka ngokutsha kunye nokukhuseleka kwenqwelomoya, i-Etihad Wellness, eqinisekisa ukuba imigangatho ephezulu yococeko igcinwa kuwo onke amabakala ohambo lwabathengi.
I-Etihad Airways yeyesibini ephethe iflegi ye-United Arab Emirates. Iofisi yayo eyintloko ikwiSixeko saseKhalifa, e-Abu Dhabi, kufutshane nesikhululo seenqwelomoya i-Abu Dhabi. I-Etihad yaqala ukusebenza ngo-Novemba 2003. Yinkampani yesibini yenqwelomoya enkulu e-UAE emva kwe-Emirates.